बिवाहपछी पहिलो पटक दयाहांग राई संग आंचल शर्मा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/बिवाहपछी पहिलो पटक दयाहांग राई संग आंचल शर्मा
बिवाहपछी पहिलो पटक दयाहांग राई संग आंचल शर्मा
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण चलचित्र छायाँकनदेखि प्रदर्शनसम्म ठप्प छ । अझै कति समयसम्म ठप्प हुने हो? टुंगो छैन् । तर, विगत एक महिनाअघि लकडाउन खुकुलो भएसंगै म्युजिक भिडियोको छायाँकन भने चलिरहेको छ । चलचित्रको छायाँकन कहिले शुरु हुने अन्योल हुँदा अहिले चलचित्रका चलेका थुपै कलाकारहरु म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त देखिन थालेका छन् । पल शाह, पुष्प खड्का, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का, दयाहाङ राई लगायतका कलाकारले म्युजिक भिडियोको छायाँकन गरेका छन् ।
त्यस्तै, अभिनेत्री आँचल शर्माले पनि म्युजिक भिडियो छायाँकन गरेकी छन् । आँचलले शुक्रबार मिलन चाम्सको निर्देशनमा एक म्युजिक भिडियोको छायाँकन गरेकी छिन्, जुन उनको लकडाउनपछिको मात्र नभई बिहेपछिकै पहिलो भिडियो हो । आँचल गत फागुनमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । राजेश पायल राईको स्वर, निर्मला राई ‘परिवेश’को शब्द रचना तथा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतका राजधानी काठमाडौँ आसपासका विभिन्न स्थानहरुमा छायाँकन सम्पन्न गरिएको निर्देशक चाम्सले जानकारी दिए । भिडियोमा अभिनेता दयाहाङ राई र आँचल शर्माको जोडीलाई दर्शकले हेर्न पाउने छन् ।
दयाहाङ र आँचलको यो पहिलो काम हो । यी दुई कलाकारलाई दर्शकले एउटै फ्रेममा अहिलेसम्म देख्न पाएका थिएनन् । लामो समयपछिको पहिलो काम भएकाले उत्साहित देखिएकी आँचलले दयाहाङसंग काम गर्न सहज भएको बताईन् । आफूले हेरेको पहिलो नेपाली चलचित्र ‘लुट’रहेको र आफूलाई मनपर्ने कलाकारसंग काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको आँचलको भनाई थियो । दयाहाङ पनि आँचलको कामबाट प्रभावित भएको बताए । भिडियोमा दयाहाङ र आँचल विवाहित जोडीको रुपमा प्रस्तुत हुनेछन्। दयाहाङलाई आर्मी अफिसर (याप्टेन)को भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको निर्देशक चाम्स बताउँछन् । दयाहाङ र आँचलको सहकार्य स्किनमा हेर्न दर्शकले भने केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदान सकिए लगत्तै भीम रावलले गरे एमाले छोड्ने संकेत!
सरकारी गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा आमा र छोराको ज्यान गयो
ओली विरुद्ध मानहानीको मुद्धा हाल्ने रामकुमारी झाँक्रीको चेतावनी
कोरोनाको लक्षण सहित एउटै विद्यालयमा १०२ जना विद्यार्थी र ६ शिक्षक सिकिस्त भएपछि विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द